कसरी मिल्यो मधेसी मोर्चा र बाबुरामको बोली र लोली ? « Pahilo News
कसरी मिल्यो मधेसी मोर्चा र बाबुरामको बोली र लोली ?
प्रकाशित मिति : 26 February, 2017 9:47 am
१५ फागुन । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी परित्याग गरेयता दोस्रो पटक तराई–मधेसका जनताको मनोविज्ञानलाई भजाउन खोजेका छन् । पहिलो पटक असफल भएका डा. भट्टराई यस पटक भने सफल होलान् त ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
मधेसी मोर्चाको एजेन्डाको रुपमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई टुंगो लगाउनेतिर खासै तत्परता नदेखाएका डा. भट्टराईले केही दिनअघि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि भने आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चासँग संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव राखे । साथै, पछिल्लो समय सहकार्यमा जुटेका संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिले एउटै बोलीमा निर्वाचन फिर्ता लिनसमेत माग गरेका छन् । तर, आन्दोलनको मुडमा रहेको र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको मोर्चाले भने डा. भट्टराईको संयुक्त आन्दोलनको प्रस्तावलाई पत्याई भने हालेका छैनन् ।
मधेस छिर्ने योजना
नयाँ शक्ति, नेपाल गठन गरेयता डा. भट्टराईले तराई–मधेसमा आफ्नो राजनीति केन्द्रित गर्ने चाहना पाल्दै आएका छन् । संविधान संशोधनको पक्षमा उभिँदै आएको मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएलगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रम थालेका छन् । डा. भट्टराईले आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चासँग आन्दोलनमा मिलेर जाने र तराई–मधेसमा आफ्ना एजेन्डाहरुलाई प्रस्तुत गर्ने दाउ रचेको बताइन्छ ।
डा. भट्टराईले संविधान जारी भएलगत्तै पनि तराई–मधेसमा गएर आफ्नो एजेन्डा राख्ने प्रयत्न नगरेका भने होइनन् । संविधान जारी भएलगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गर्ने कुरा उनले तत्कालीन समयमा नै उठाएका थिए । मधेसमा आफ्ना एजेन्डा लिएर छिर्नका लागि एमाओवादी र सांसद पद समेत त्यागेर डा. भट्टराई जनकपुरतिर ओर्लिएका थिए । त्यसो त, तत्कालीन संविधानसभामा राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका डा. भट्टराईले संविधान जारी भएपछि मधेसी मोर्चाले जनाएजस्तै बेखुसी पनि जनाएका थिए ।
तर, रामचन्द्र झाजस्ता केही नेताहरुलाई लिएर मधेसका जनतासँग नजिकिन जनकपुर झरेका डा. भट्टराईलाई मधेसका जनताले पटक्कै स्वीकारेनन् । राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका डा. भट्टराईले संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भन्दै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताका साथै तराई मधेसका जनताले समेत जनकपुरबाट धपाए । माओवादी छाडेयता मधेसमा आफ्नो एजेन्डा लिएर जान अहिले डा. भट्टराईले मोर्चासँग संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मोर्चाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया भने दिइसकेको छैन ।
प्रचण्डको पिछलग्गु नबन्ने अडान
कुनै–कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. भट्टराई एउटै मञ्चमा बसे पनि यी दुई नेताबीचको सम्बन्ध अझै सौहार्द हुन सकिरहेको छैन । सात महिनाअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएयता डा. भट्टराईले एक पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन् । प्रचण्ड र भट्टराईको भेटमा भट्टराईले राजनीतिक विषयमा भन्दा पनि आफ्ना कामहरुका विषयमा मात्र कुरा उठाएका थिए । खासगरी, केही समयअघिको प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजनाले गोरखाका जनतालाई प्रभाव पार्ने विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीसामु कुरा राखेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन रोक्न माग गर्नुको पछाडि भने प्रचण्डले जेजेमा ल्याप्चे लगाउँछन्, त्यसैत्यसैलाई स्वीकार्ने पक्षमा डा. भट्टराई नभएको हुँदा निर्वाचनको विरोध गरेको बताइन्छ । अझ, केही महिनाअघि आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम मोर्चासँग आवद्ध रहेको हुँदा र निर्वाचनको पक्षमा उभिँदा फोरमसँग सम्बन्ध टुट्न सक्ने भएको कारण पनि डा. भट्टराईले निर्वाचन रोक्ने मधेसी मोर्चाको मागमा आवाज मिसाएको बताइन्छ ।
चुनाव भाँड्ने खेल
डा. भट्टराईले मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना देखेका छैनन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गर्दा पनि पहाडमा चुनाव भए पनि तराई मधेसमा भने चुनाव नहुने कुरा बताउने गरेका छन् । मधेसी र थारुहरुको बाहुल्य रहेको ठाउँमा चुनाव हुन नसक्ने नयाँ शक्तिको विश्लेषण रहेको छ । त्यही कारण स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नका लागि मधेस र थारुहरुसँग आन्दोलनमा सहकार्य गरेर जाने मनस्थितिमा डा. भट्टराई पुगेको बताइन्छ ।
त्यसो त, नयाँ शक्तिले सुरुदेखि नै मधेस आन्दोलनको समर्थन र पृष्ठपोषण गर्दै आइरहेको छ । अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि चल्मलाउन थालेको मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने मुडमै डा. भट्टराई रहेको बुझिएको छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गरे पनि नयाँ शक्तिभित्रै भने डा. भट्टराईको निर्णयप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरु भने चुलिन थालेका छन् । नयाँ शक्तिका कार्यकर्ताहरु नै मधेसी मोर्चा र डा. भट्टराईको बोली र लोली मिल्न गएकोमा आश्चर्यमा पर्ने गरेको बताइन्छ ।